Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2007
Ligy Alfa: Baolina noana no ilalaovana
2007-06-12 @ 08:24 in Spaoro
Tsy mampino nefa dia tena izay mihitsy no marina. Ny mpijery rehetra dia nahamarika avokoa. Raha nanao fampitahana ny lokon’ny baolina komavoky ny vovoky ny Malagasy aho talohaloha raha baolina tena madio toy ireny vao novidiana ireny ny an’ny vahiny dia baolina noana indray no nilalaovan’ny Uscafoot sy ny Japan Actuels Manjakaray tamin’ny alahady teo.
Amin’ity indray mitoraka ity aho dia tsy mametraka statistika noho ny tsy fahatratrarako ny fanombohan’ny lalao. Atao hoe afa-po ihany aho na dia izany aza satria nahita ny fidirana faharoa sy ny fanalavam-potoana indroa miditra ary ny fitifirana penalty. Araka ny haavo teknikan’ny lalao eto an-toerana dia nifandanja teo amin’ny vokatra ny roa tonta na dia nanindry tamin’ny lafiny rehetra aza ny ekipan’ny Kaominina nihaona tamin’ny Kartie iray eto an-drenivohitra ihany.
Raha nanaraka ny mpilalao ny mpijery dia gaga amin’ny fanovana baolina hatrany ataon’ireo ekipa roa tonta isaky ny mivoaka ny baolina. Nihevitra aho hoe samy manana ny baolina mahazatra azy angaha ry zalahy izany. Jerena avy eo dia nitovy ihany ny safidin’ireo mpiandry tokonana roa eo ambony kianja. Teo dia efa lasan’eritreritra aho fa misy zavatra tsy mety amin’ny baolina lalaovina eny ambony kianja. Kanjo tokoa rehefa manandrana manao tifi-davitra ireo mpilalao dia hafa tokoa ny fanenon’ny baolina. Mitovy amin’izany dia tsy mety tena lasa lavitra mihitsy io baolina io na dia manezaka aza ny mpilalao roa tonta. Ny mampihomehy aza anie dia baolina mora avokoa ilay baolina maty tamin'io fotoana io e!
Hoy aho hoe dia tsy misy fitsapana baolina ve ataon’ny mpitsara ary tsy misy fanabontsinana baolina ve ao amin’ny kianjan’i Mahamasina. Lalao sangany eto amin’ny firenena no atao na dia samy avy eto Antananarivo aza no milalao. Ambin’izany moa ny tapakila fidirana izay federation malgache de football Champion’s league 2006 (fa tsy 2007) ary miampy ny laharan’ny tapakila fotsiny. Niahiahy mihitsy moa ilay olona niara-nividy tapakila tamiko hoe izy ve ity ? (hevero fa ao anatin’ny fialantsasatra izao nividianako tapakila izao fa mbola mividy tapakila hidirana hatrany izay te-hijery baolina) marihiko hatrany koa moa ireny zavatra mody bitika ireny hijerena ny lesoka amin’ny fanomanana ny lalao fialam-boly rehetra. Tsy misy fanamarihana fa nandalo tany amin’ny vaomieran’ny fampisehoana sy ny fanaovam-pety ihany koa moa ny karatra ka vao maika manalasala hatrany. Sa kopaka isasahana ?
Ireo fahadisoana nampahantra an'i Madagasikara (1)
Sioka telo manamarina sinema
Fa inona marina no tadiavin'ny ao amin'ny famorian-ketra ao?
Ilay zava-tsy nisy niteraka zavatra maro
Ampiasaina atao inona ny TVM? [nampiana 29 jona]